एउटा नेपालीको मुटु दुख्दा सबै नेपालीको मुटु दुख्नु पर्छ
हरेक दिन रोजगारीको शिलशिलामा १५ सय युवा बिदेश जान्छन । ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालका ४० लाख नेपाली बिदेशमै छन । जसमा २५ लाख नेपाली खाडी मुलुकमा छन । आईसीसी विश्व कप क्रिकेट खेल चलिरहदा अस्ट्रेलिया निवासी दीपा राईले भारत र बङ्गलादेश बीच खेलमा युनाईटेड अगेनस्ट स्लेभरी अफ माईग्रेन्ट वर्कर लेखेको ब्यानर शो गरे पछी एकाएक चर्चामा आईन ।
सन १९९८ मा स्टुडेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया पुगेकी राई एनआरएन आइसिसी सदस्य तथा एनआरएन आप्रवासी श्रमिक संघकी उपाध्यक्ष पनि हुन । अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली चेलीलाई कसरी खाडी दुख्यो त? यही बिषयमा केन्द्रित रहेर राज्यसत्ताको लागी निश्चल काउचाले राईसँग गरेको कुराकानीमा आधारित अंस ।
निश्चलः तपाईं अस्ट्रेलियामा बस्ने मान्छेलाई खाडीका आप्रवासी श्रमिकका लागि काम गर्ने उत्प्रेरणा कसरी जाग्यो ?
दीपाः हामी अष्ट्रेलिया, अमेरिका वा युरोपमा जहाँ बसे पनि हामी मध्य पूर्वमा मरिरहेका हाम्रा आप्रवासी श्रमिकका बारेमा सबै थाह छ । यो समस्यालाई हाम्रो सरकार र अन्तराष्ट्रिय समुदायद्वारा सम्बोधन गर्नु पर्ने हो । मैले धेरै पढेको र देखेको छु आप्रवासी श्रमिक र श्रमिक परिवारको कथा व्यथाहरु कतारी कम्पनीहरुबाट हाम्रा आप्रवासी श्रमिकहरु शोषण भइरहेको कुराले मलाई व्यक्तिगत रूपमा छुने गरेका छन् ।
हामी विश्व भरिका युवाहरु मिलेर कर्मा तेन्जिङ न्याङ्मीको संयोजकत्वमा युनाईटेड अगेनस्ट स्लेभरी अफ माईग्रेन्ट वर्कर भनिने समूह छ । जसमा ४ हजार ५०० सय सदस्य छन । संसार भरिका नेपाली युवाहरुको समूह मिलेर आप्रबासी श्रमिकको दासत्वको बिरुद्ध २०१३ मा न्यूयोर्क, सान फ्रान्सिस्को, लन्डन, सिडनी र मेलवर्नमा र्याली आयोजना गरी सकेका छौ । यस समस्याको सामना गर्न एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले पनि वचनबद्धता जनाउनु भएको छ । म आफै पनि एनआरएन आइसिसी सदस्य तथा एनआरएन आप्रवासी श्रमिक संघकी उपाध्यक्ष रहेको नाताले एउटा नेपाली दुख्दा अर्को नेपालीको मुटु दुख्नु स्वभाविक हो ।
निश्चलः तपाईंले ब्यानर शो गर्न विश्वकप क्रिकेट भइरहेको स्टेडियम मेलवर्न क्रिकेट ग्राउन्ड नै रोज्नुको कारण ?
दीपाः आईसीसी विश्व कप क्रिकेटको क्वाटर फाइनल खेल भारत र बङ्गलादेश बीचमा थियो । मैले ब्यानर देखाउनु कारण खाडीमा दक्षिण एसियाली आप्रवासी श्रमिकको संख्या धेरै छ । मलाई आशा थियो त्यो खेलमा ब्यानरमा देखाउदा यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रीय मिडिया र लाईभ टेलिकास्ट गरेका टिभीले फोकस गर्ने छन । दक्षिण एसियाली देशहरू मिलेर कतारी सरकारसंग कूटनीतिक आधारमा पहल गरेर यो समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन र महसुस गराउन सकिन्छकी भनेर मैले सो खेलमा ब्यानर शो गरेकी हुँ ।
निश्चलः खाडी देखी मलेसिया सम्म नेपाली आप्रवासी श्रमिकको स्थिति त नाजुक छ तर , तपाईंहरुले खाडीलाई फोकस गर्नुको कारण ?
दीपाः कतारले २०२२ मा फिफा विश्व कप आयोजना गर्न गैरहेको छ । जहाँ आप्रबासी श्रमिकहरुले दासत्वको रुपमा स्टेडियम निर्माण गरिरहेका छन । तलव न्युन छ बासस्थान राम्रो छैन । तसर्थ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीच यो बिषयमा जानकारी गराउदै आप्रवासी कामदारको समस्या कतार सरकार समक्ष उठाउन चाहन्छौ । ताकी कतार सरकारले आफ्नो सिस्टम बदलेर आप्रबासी श्रमिकको हितको निम्ती काम गरोस ।
निश्चलः कुनै पनि नेपाली श्रमिक बिदेशी भुमीमा जेल चलान हुदा या ठगीमा पर्दा रेस्पोन्स लिने जिम्मेवारी त नेपाल सरकारको होईन र ?
दीपाः हामी लज्जित हुनु पर्ने अवस्था छ । आप्रवासी श्रमिकले पठाएको रेमिटयान्सले नै देशको अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर गर्व गर्ने सरकार नै रेमिटयान्स पठाउने आफ्नै कामदारको सुरक्षा दिन असफल छ । यस बिषयमा नेताहरुलाई नलज्जाबोश न आत्मग्लानी नै ।
निश्चलः २०२२ मा कतारले फिफा विश्वकप आयोजना गर्दैछ । यसैको अवसरमा खाडीका आप्रवासी श्रमिकका मुद्धा उठाउदा अन्तराष्ट्रिय मिडियाको साथ पाईन्छ भनेर यो अभियान चलाईएको हो ?
दीपाः हजुर हो । कतारमा स्टेडियम निर्माणको क्रममा हालसम्म अनुमानित ४००० हजार मजदुरको मृत्यु भईसकेको छ र अन्तराष्ट्रिय समुदायले यो समस्याको बारेमा शान्त बस्न सक्दैनन हामी जस्ता जिम्मेवार नागरिकले विश्वव्यापी रुपमा आवाज उठाउन जरुरी छ ।
निश्चलः खाडीका आप्रवासी श्रमिकका हक हितका लागि बोल्दा अस्ट्रेलियाली प्रहरीको फन्दामा पनि पर्नु भयो ?त्यती बेला तपाईंलाई कस्तो अनुभव भयो ?
दीपाः मलाई थाहा थियो मैले कुनै गल्ती कार्य गर्न गैइरहेको छैन । जव हामी राम्रो काम गर्दैछौ भने डराउनु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन । मैले ब्यानर राख्दा सुरक्षाकर्मीलाई नै सोधेर राखेकी हुँ र पछी मलाई सोधपुछको लागि केही समय नियन्त्रणमा लिए पछी मैले हाम्रो मुद्धाको बारेमा बताए र पछी छोडी दियो । मलाई त्यस कुनै पछुतो या आत्मग्लानी केही छैन ।
निश्चलः तपाई एनआरएन आप्रवासी श्रमिक संघकी उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । खाडी मात्र होईन अरु कुनै पनि देशमा पुगेर श्रम शोषणमा परेरका या ठगिएका नेपाली आप्रवासी कामदारलाई तपाईंको संस्थाले के-कस्तो सहयोग गर्न सक्छ ?
दीपाः आईसीसी अध्यक्ष ज्युले आप्रवासी श्रमिक हितको लागि १ करोडको राहत कोष खडा गरिसक्नु भएको छ । हामीले त्यो रकम कसरी सहयोग गर्ने भनेर निती र योजनामा फोकस गरिरहेका छौ । नेपाली कामदार हितको लागि युएन वोमन, वाल्क फ्री र आईएलओ जस्ता संस्थाहरुसंग मिलेर काम गरिरहेका छौ । अब चाडै नै राम्रो नतिजा देखा पर्ने छ ।
निश्चलः अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ की ?
दीपाः मैले त्यहा ब्यानर राख्नु मेरो सानो प्रयास थियो । म नेपाली कामदारहरुको दुर्दशाको बारेमा जानकारी राख्ने गर्छु र आप्रवासी श्रमिकको समस्या र सुरक्षा ग्यारेन्टि सरकारले गरोस् भन्ने चाहन्छु । मैले व्यक्तिगत रुपमा आफूले सकेको गरिरहेकी छु र गरिरहने छु । यो हाम्रो अभियानलाई अन्तराष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउन चाहन्छौ । हाम्रो अभियानलाई सबै नेपालीहरुले साथ् दिन पनि आग्रह गर्दछु ।
Last Updated on Sunday, 29 March 2015 23:36
२५ बर्ष सम्म पसिना बगाएको पार्टीलाई छोड्न बाध्य पारीयो--शिवलाल थापा
विगत २५ बर्ष देखी आदिबासी जनजाती,दलित,महिला,मुस्लिम,मधेसी, सिमान्तक्रित,अल्पसन्ख्यक र उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारको मुद्दा बोकेर निरन्तर शान्तीपूर्ण सङ्घर्ष गर्दै आएको दाबी गर्ने राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी आजसम्म आईपुग्दा धेरै पटक बिभाजनको अवस्थाबाट गुज्री सकेको छ । यस पार्टीबाट आदिवासी जनजाती , दलित उत्पीडित समुदायको आवाजलाई सतहमा ल्याइदिएर तरङ पैदा गर्ने व्यक्तित्वो गोरेबहादुर खपाङीहरुले असन्टुस्टी जनाउदै बिदा भए भने कोही लिम्बुवानी राजनीतिमा होमिएका छन,कोही भर्खरै स्थापना भएको संघीय समाजवादी पार्टिमा समाहित भएका छन ।
जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक पद्दती , संघीयता , धर्म निरपेक्षता जस्ता गहन मुद्दाहरु बोकेर अगाडि बढेको राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टिमा फेरी अर्को विभाजनको स्थिती सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको समस्या विस्त्रित रुपमा केलाई त्यस्को निकास के हुने भन्ने निस्कर्ष सहित अगाडि आएको यस् पार्टिको मुलभुत मुद्दामा नै अहिले नेपाली राजनितीको केन्द्रबिन्दु रहेको छ । तर, यती हुँदा हुँदै पनि उत्पीडित वर्गको पक्षमा पार्टीको जुन लाइन थियो त्यसमा पार्टीले आफ्नो लाईन छोड्दै गएको , यी उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन पार्टी नेत्रित्वलाई सल्लाह दिदा कुनै सुनुवाई नभएको , आदिबासी जनजाति,दलित, महिला,मुस्लिम र मधेसिको मुद्दालाई पनि त्याग्दै जान थालेको,पार्टी अध्यक्ष एम.एस थापाले पार्टीमा तानाशाही र हैकमबादी लादेको जस्ता आरोप लगाउदै दोश्रो संबिधानसभाको समानुपातिक तर्फबाट सभाषद बनेका शिवलाल थापाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी लोकतान्त्रिक गठन भएको छ ।
शिक्षक पृष्‍ठभुमिका थापा शिक्षण पेशा छाडेर राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीमा रही राजनैतिक करीयर सुरु गरेका थिए । लामो समय सम्म यसै पार्टीमा रही काम गरेका थापाले एकाएक फागुन १९ गते पार्टी बिभाजन गरेका छन। अहिले सम्म अध्यक्ष एम.एस थापाको अदक्ष नेतृत्वले गर्दा पार्टी सोर्हौ पटक टुक्रा भएको उनको भनाइ छ । उनी पार्टीकै निदेर्शनमा २०६२ श्रावण महिनाको १७ गते देखि २०६३ बैषाख ११ गते सम्म तनहुँ जिल्ला बिकाश समितिका उपसभापति समेत भएका थिए ।२०६५ भाद्र १८ गते राजमुपाले नेपाल बन्द गर्दा उनी एक हप्ता सम्म प्रहरीको हिरासतमा बस्ने राजमुपाको नेताको तर्फबाट उनि पहिलो ब्यक्ति पनि हुन । पार्टी बिभाजन बारे उनीसँग राज्यसत्ताको राउन्ड टेबलमा भएको संवाद ।
राज्यसत्ता : नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लाग्नु भएछ,के हुँदै छ्?कोको हुनुहुन्छ?
शिवलाल :- हामीले नयाँ पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निबेदन दिएका छौ। प्रकृया अगाडी बढ्दैछ। हाम्रो नयाँ दल राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी(लोक्तान्त्रिक)नेपालको केन्द्रिय तदर्थ समितिमा राजामुपाका पुर्व उपमहासचिव चन्द्रबहादुर श्रिश,केन्द्रिय सदस्यहरु लालबहादुर राना,टोपबहादुर बलाल,सानुबाबु लामा,धर्म छन्त्याल्(मल्ल) ,सुबास राइ र संघीय मगरात मन्च संयोजक जनकलाल थापा लगायतका साथीहरु हुनुहुन्छ।
राज्यसत्ता:-पार्टीले भर्खरै रजत महोत्सव मनायो अझै मजबुत हुँदै जानु पर्नेमा तपाईंहरु पार्टी फुटाएर हिंड्नु भयो नि?
शिवलाल :- राजमुपाले अहिले रजत महोत्सव मनाइरहेको अवस्था छ्।लामो ईतिहास बोकेको पार्टी भएता पनि २५ वर्षको ईतिहासमा यो पार्टीले गौरव गर्ने खालको उपलब्धिमुलक कार्य गर्न सकेको छैन।२०४७ बैशाख २३ गते नेपाल जनमुक्ती मोर्चा नामबाट यो पार्टीको स्थापना भयो। त्यसको ठीक दुई महिनापछी तनहुँमा हामीले यो पार्टी स्थापना गरेका हौ। पार्टीको स्थापनाकालदेखी नै हामीले एम.एस.थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गिलाई नेताको रुपमा स्विकार गर्दै आएका हौ। जब २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्‍यो,त्यसपछी बदलिदो परिस्थिती अनुसार राजाले मन्त्री हुन चाहने राजनीतिक दल,स्वतन्त्र नागरिक,बुद्धिजिवी,पत्रकार सबैलाई मन्त्रिको लागि आह्वान गर्‍यो ।
त्यो बिषयमा छलफल गर्न राजामुपा को बैठक बस्यो। पार्टीले राजाको कदमलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गर्दा हामीले यो कदमलाई समर्थन गर्नु हुँदैन भनेका थियौ। तर अध्यक्ष एम.एस.थापाले जसरी पनि राजाको कदमलाई समर्थन गर्नु पर्छ भन्ने जिद्दी गरेपछी सोही प्रस्ताब पारीत भयो। अनी मन्त्रिको लागि कती जनाको नाम दरबार पठाउने भन्ने सल्लाह हुँदा १२ जना केन्द्रिय सदस्यको नाम पठाउने सल्लाह भयो। त्यतिबेला अध्यक्षले के प्रस्ताब् पनि ल्याउनु भयो भने दरबारमा १२ जना केन्द्रिय सदस्यको नाम जादै छ्। मन्त्री भए पनि नभए पनि भविष्यमा पार्टीभित्र आउने सुबिधाहरुमा यि १२ जना केन्द्रिय पदाधिकारी र सदस्यहरुले दाबी बिरोध गर्न पाइदैन ।
१२ जना बाहेककालाई भाग पुगेपछी मात्र यो १२ जनाले पाउछ भनेर पार्टीमा निर्णय भएको छ्। १२ जना मध्य एम.एस.थापाको नाम १ नम्बरमा गएको छ्। १ नम्बरमा नाम भएपछी मन्त्री पक्कै हुन्छु भन्ने उहालाई लागेको रहेछ। तर ३ नम्बरमा नाम भएको गोरेको नाम आयो। हामीले सोचेका थियौ कि अध्यक्ष होस् या महासचिव जो भए नि ठिकै छ् भनेर। तर गोरे मन्त्री भए पछी एम.एस.बौलाएको कुरा त हामी सबैलाई थाहा भएकै हो। त्यसपछी २०६४ सालमा संबिधानसभाको चुनाव भयो। राजमुपाले दुई सिट पायो। पार्टीले कसलाई पठाउने भन्ने बारे केन्द्रिय समितीमा छलफल भयो। त्यतिखेर अध्यक्ष एम.एस.थापा नै सभासद खानको लागि तम्सिनु भयो।
अरु सबै साथीहरुले उहालाई पठाउनमा सहमती गर्नु भयो। तर मैले असहमती जनाए। मैले दरबारमा १२ जनाको नाम गएको र त्यतिखेर पार्टीमा भएको निर्णयले एम.एस.थापा जान पाइदैन।अरुलाई पठाउनु पर्छ भनेर कुरा उठाए।त्यसपछी तत्कालिन महासचिव बयानसिङ राइ र अध्यक्ष कानेखुसी गर्नु भयो। त्यसपछी महासचिवले त्यो रजिस्टर हरायो भन्नु भयो। अनी मैले बिरोध गर्दा गर्दै एम.एस.ले जबर्जस्ती आफु सभासद भएको निर्णय गर्न लगायो। यो कुरा तत्कालिन महासचिव बयानसिङ राइ सँग सोधे थाहा हुन्छ। त्यही समय देखी नै अध्यक्ष एम.एस.थापाको मलाई हेर्ने दृष्‍टिकोण राम्रो भएन।२०६७ मा पार्टीको चौथो राष्ट्रिय महाधिबेशन भयो। पार्टी सामुहिक नेत्रित्वमा गयो। बिधान सोही अनुसार बन्यो। तर व्यबहार तानाशाही नै रह्यो। हामीले मुलुकको परिवर्तन अनुसार पार्टीले छलाङ मार्ने किसिमले कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने सल्लाह दियौ। तर उहाले सुन्नु भएन।
२०७१ कार्तिक १४ र १५ गते हेटौंडामा भएको १४ औ बैठकमा पार्टीलाई अग्रगामी ढंगले अगाडि लान पर्‍यो भनेर हामीले प्रस्ताव गर्यौ। उल्टै उहाले १९ दलिय मोर्चा र ३० दलिय मोर्चाको आन्दोलनमा जान हुँदैन भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो। हामीले अहिलेको परिस्थिती अनुसार आन्दोलन छोड्न नहुने कुरा राख्यौ। बहुमतको निर्णय अनुसार पार्टीले आन्दोलनमा भाग लिने निर्णय भयो। हिजो २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि हामीले ७ दलिय मोर्चाको आन्दोलनमा जाने सल्लाह दिएका थियौ। तर अध्यक्षको एकलौटी निर्णय अनुसार राजाले चालेको कदम ठीक छ् भनेर जबर्जस्ती निर्णय गरायो। अझ उहाले रेडियोमा राजाको कदमको समर्थन गर्दै अन्तर्वाता दिनु भयो। यि र यस्तै कारणले पार्टीभित्र हामीले असहमती जनाउदै आयौ। तर नेत्रित्वमा सुधार होला भन्दा उल्टै हामीलाई कारबाही गर्दै गयो।
अन्तमा हामीलाई कि सभासद छोड कि पचास् पचास् लाख ल्याउ भन्नु भयो। सभासद मात्र होइन पार्टीबाट नै राजिनाम माग्न थाल्नु भयो। पार्टी छोड्नु हाम्रो बाध्यता हो। आफु पदमा रहदा सबै ठीक आफुले नपाएपछी बेठिक भन्न राम्रो हुँदैन। जुन दिन हामी सभासद भएर संबिधानसभामा गयौ त्यही दिन देखी पार्टीबाट हामीलाई सहयोग कहिल्यै भएन। २५ बर्ष सम्म पसिना बगाएको पार्टीलाई छोड्न कसलाई मन लाग्छ र। यो त हाम्रो बाध्यता हो।
राज्यसत्ता:- ३० दलिय पहिचान र संघीय पक्षधरको आन्दोलन चर्किदै गर्दा नयाँ पार्टी खोल्नुको कारण र उद्धेष्य के होला?
शिवलाल:- पार्टीको स्थापनाकालदेखिनै आदिबासी जनजाती,दलित,महिला,मुस्लिम,मधेसिको पहिचान र अधिकारको कुरा उठाउदै आएका हौ। अहिले सम्म यही मुद्दालाई हामीले आत्मसात गरिरहेका छौ। हामी संबिधानसभामा किन आएको हौ भने हाम्रो मुद्दालाई अब बन्ने संबिधानमा स्थापित गराउनको लागि र संबिधानसभाबाट नै संबिधान लेख्नको लागि आएका हौ। संबिधानसभाबाट पहिचान र अधिकार सहितको संबिधान दिन नसक्ने परिस्थिती आएकोले नेपाली जनताले हामीलाई पठाएका हुन। उनिहरु सँग नै सोध्नु पर्छ भनेर हामी अहिले सडकमा छौ। दलहरु फुट्नु र जुट्नुले यो आन्दोलनलाई कुनै असर पर्दैन।हामी जहाँ रहे पनि सङ्घियता,गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बारेमा हामीले कसै सँग सम्झौता गर्दैनौ। अहिलेको आन्दोलनलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने छ्। नयाँ पार्टी खोल्नुको कारण त धेरै छन। प्रमुख त राजनीतिक बिचलन र नेत्रित्वको कार्यसैली नै प्रमुख हो। अन्यमा पार्टीमा बसेर काम गर्न सक्ने बातावरण नै भएन। २५ बर्ष सम्म एउटै पार्टीमा बस्न सक्दा अहिले तत्कालै छुट्टीनु पर्ने बाध्यता आउनु यो दु:खद कुरा हो। हामीलाई पनि दु:ख लागेको छ् ।
राज्यसत्ता :- के यसरी पार्टी फुटाउदै हिडदा आदिबासी ,दलित,मधेसी,महिला,अल्पसङ्ख्यक,उत्पीडित समुदायले मुक्ती पाउलान ?
शिवलाल:-बिगत २५ बर्षको ईतिहासमा हामीले आदिबासी जनजाती,दलित,महिला,मुस्लिम,मधेसी, सिमान्तक्रित,अल्पसन्ख्यक र उत्पीडित समुदाय्को पहिचान र अधिकारको लागि जुन मुद्दा बोकेर सङ्घर्ष गर्दै आयौ। आज त्यो मुद्दाले सार्थक रुप लिन सकेन। राजामुपाले त्यो मुद्दालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन। सार्थक कार्यक्रम पार्टीले दिन सकेन।हामीले पटक पटक यी उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन पार्टी नेत्रित्वलाई सल्लाह दियौ। तर कुनै सुनुवाई भएन। अबका भाबी दिनमा यिनलाई समेटेर यिनिहरुको समस्या समाधान गर्ने खालको कार्यक्रम हामीले ल्याउदै छौ। मुलुक भर छरिएर रहेका अल्पसन्ख्यक,सिमान्तक्रित आदिबासी जनजाती, दलित,महिला,मुस्लिम,मधेसी र उत्पीडित वर्ग सबैलाई एक ढिक्का गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो कार्यक्रम रहने छ्।
राज्यसत्ता :- राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी कछुवा गतिमा हिंडेकोले पार्टी छोड्नु भएको त होइन ?
शिवलाल :- राजमुपा कछुवाको गतिले हिंडेको कारण हामीले पार्टी परीत्याग गरेका होइनौ। अलिकती त पार्टीको जुन आदिबासी जनजाती,महिला,दलित,मुस्लिम,मधेसीलाई हेर्ने दृष्‍टिकोणमा पार्टी विचलन हुन लागेको हामीलाई महसुस भयो। यो बिषयमा हामीले धेरै सुझाब राख्यौ। तर कुनै सुनुवाई भएन। अध्यक्षको कार्यसैलिमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन। पार्टी झनझन अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो। हामीले काम गर्ने सहज बातावरण भएन। त्यसैले हामीलाई बाध्यता पर्यो।
राज्यसत्ता :- राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी सँग कुन कुन कुरामा मतभेत भएको हो ?
शिवलाल :- पहिलो कुरा त उत्पीडित वर्गको पक्षमा पार्टीको जुन लाइन थियो। त्यसैमा पार्टीले आफ्नो लाईन छोड्दै गयो। आदिबासी जनजाति,दलित, महिला,मुस्लिम र मधेसिको मुद्दालाई पनि त्याग्दै जान थाल्यो। अर्को कुरा अध्यक्षको कार्यसैलिमा कहिल्यै परिवर्तन भएन। आफ्नो वरीपरी घुम्ने केही मुट्ठिभर आसेपासेलाई लिएर कोठे राजनीति गर्न कहिल्यै छोड्नु भएन। हाम्रो सुझाबको कहिल्यै कदर भएन। पार्टीको हिसाब किताब कहिल्यै पारदर्षी भएन। पार्टीका नेता कार्यकर्ता दिनप्रतिदिन बिस्थापित हुँदै जादा पनि नेत्रित्वको ध्यान गएन। पार्टीको बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिको बिषयमा कहिल्यै बहस भएन। गत सालदेखी त के देखियो भने दुई सभासद पद कसले किन्ने भनेर अध्यक्षले बिज्ञापन गर्दै हिंडेको पाइयो। पार्टीका नेता कार्यकर्ता बिचमा झगडा गराइ पार्टीलाई कम्जोर पार्ने खेल शुरु भयो।नेत्रित्वप्रती सबैको विश्वाश गुमी सकेको अवस्था छ्। अहिले तत्काल नयाँ दलमा नआएता पनि ढिलो चाडो राजमुपका ७५% केन्द्रिय नेताहरु नयाँ दलमा आउछन। अहिले म सँग केही नेता बाहेक सबै केन्द्रिय नेताहरुको संपर्क भईरहेको छ ।
राज्यसत्ता :- तपाईंहरुलाई सभासद बनाउदा केही अवधीको लागि मात्र दिएको तर तपाईंहरु त्यो पालना नगरि आफु मात्र पद खाएर बस्ने हेतुले नयाँ पार्टी गठन गरेको आरोप छ् नि ?
शिवलाल:- बिपक्षहरुले नानाथरिका आरोप लगाउनु त स्वभाविक नै हो। त्यसलाई हामीले सहज रुपमा लिएका छौ। यथार्थ केहो भने २०७० मङ्सिरमा भएको संबिधानसभा(दोस्रो) को निर्वाचनको परीणाम अनुसार राजमुपाले दुई सिट प्राप्त गरेपछी पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठक २०७० पुष १९ गते बस्यो। कसलाई पठाउने भन्ने बिषयमा छलफल भयो। धेरै केन्द्रिय नेताहरु सभासद हुन इच्छुक भएपछी दुई पदको लागि झगडा नगरौ। सहमती गरेर एक एक बर्ष खाने भन्ने भयो।भोलिपल्ट २० पुषमा बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा पहिलो बर्ष को जाने भन्ने बिषयमा छलफल हुँदा सबै जना पहिलो बर्षमा जाने भएपछी अघिल्लो दिनको सहमती टुट्यो । पार्टीभित्र निर्वाचन हुने भयो।पुस २१गते निर्वाचन भयो। नतिजा अनुसार म निर्बाचित भए। होमाया गुरुङ र म दुवै जना जनजाती समुहको भएकोले निर्वाचन आयोगले मानेन। फेरी हामी दुई बिच को जाने भन्ने बिषयमा छलफल भयो। अन्तमा हामी दुई बिच सहमती हुन सकेन। आखिर निर्वाचन भयो। परीणाम अनुसार मैले जिते। यसरी सहमती तोडेर दुई दुई पटक निर्वाचन गराइ सकेपछी एक एक बर्षको सहमती थियो भन्न मिल्छ? अध्यक्ष आफु भए पुरै खाने अरु भए एक एक बर्षको कुरा गर्ने? हाम्रो असहमती पदको लागि होइन। अध्यक्षको कार्यसैली र सैद्धान्तिक बिचलन प्रती हाम्रो असहमती हो।
राज्यसत्ता :- यसमा भित्री र बाहिरी शक्ती केन्द्रहरुको चलखेल् छ् भनिदै छ् नि?
शिवलाल :-यी सबै वाहियात कुराहरु हुन। असह्य भएको बेलामा कार्यर्ताहरुको ध्यान् केन्द्रित गरेर मलमपट्टी लगाउने प्रयास मात्र हो। यो भनाइमा कुनै तुक छैन। हिजो राजमुपालाई राजाबादी भन्ने गर्थे। के त्यो सत्य थियो त? साच्चै भन्ने हो भने राजमुपाभित्रका केही नेताहरु अझै पनि पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट सन्चालित छन।
राज्यसत्ता :- अहिले निर्वाचन आयोग र संबिधानसभामा अध्यक्ष कहाँ तपाईंहरुको सभासद पद खारेजको निबेदन गएको खबर छ् नि ?
शिवलाल :- हो,अहिले राजामुपाले संबिधानसभामा अध्यक्षलाई भेटेर सभासद फिर्ताको लागि निबेदन दिएको छ्। त्यसरी नै निर्वाचन आयोगमा पनि नयाँ दल खारेजको लागि निबेदन दर्ता गराएको खबर पाएका छौ।
राज्यसत्ता :- आगामी रणनिती के हुनेछ ?
शिवलाल :- सर्वप्रथम त राजमुपा भित्रका असन्तुष्ट केन्द्रिय नेताहरुलाई पार्टीमा प्रबेश गराउछौ। त्यसपछी बिगतदेखी पार्टी बाहिररहेका पुराना साथीहरुलाई पनि समेटेर ल्याउने कार्यक्रम बनाउछौ। १५ टुक्रामा टुक्रिएको राजामुपालाई पनि अट्न सक्ने बातावरण तयार गर्छौ। त्यसपछी राष्ट्रिय भेला डाक्छौ। त्यसले एउटा बलियो केन्द्रिय समिती निर्माण गर्नेछ। त्यसपछी सभासदहरुको भूमिका संबिधानसभाभित्र पहिचान र अधिकार सहितको संबिधान निर्माण गर्नेमा केन्द्रित रहन्छ भने अन्य केन्द्रिय नेताहरु जिल्लामा खटिने छन। पार्टीको संगठन बिस्तार र प्रशिक्षाण दिने छन। साथै जनताको जनजिविकाको सवालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 11:28
संगीतलाई स्वरमा सजाउने छु, गायिका सरला
सुश्री सरला पुन मगर तेवाङ-७, रोल्पाको किसान परिवारमा बाजे जंग बहादुर पुन मगरको नातिनीको रूपमा २२ भदौ , २०४७ मा बुबा मानसिँ पुन मगर र आमा गोमा पुन मगरको कोखबाट जन्म लिएकी तीन सन्तान छोरीहरू मध्ये सरला जेठी हुन् । उनले सानै उमेर देखी गीत, संगीत तथा नृत्यमा अभिरूचि राख्ने र उनको स्नेही बहिनी ईन्दिरा पुन मगर र पुष्पा पुन मगरकी दिदी सरला(सरू) खहरे-४ , माडी/पाल्पामा बस्दा संगीत यात्राले खासै अवसर नपाएकोले धेरै उपलब्धिहरू हात बाट गुमेको उनि बताउछिन् ।
(पत्रकारद्धय सारु र हमालको बिचमा गायीका सरला पून मगर)
उनी बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा १४ सेप्टेम्बर २०१४ मा मध्यपुर्विय राष्ट्रको बहराईनमा प्रवेश गरेका हुँन । उनि अन्तरराष्ट्रिय कलाकार मञ्च बहराईन शाखाले आयोजना गरेको आई.ए.एफ आईडलको उपाधि चुम्न सफल र एक अब्बल दर्जाका कलाकारका रूपमा दर्रियकी पून मगर सँग राज्यसत्ता डटकम बहराईन शाखाका पत्रकार कृष्ण सारु मगर र कान्तिपुर गल्फ साप्ताहिकका बहराईनका प्रतिनिधि कृष्ण हमाल संगको यो भलाकुसारी ।
हजुरको साँगीतिक यात्राको बारेमा केहि बताइ दिनु हुन्छ कि?
सरला - - धन्यवाद ,सर्वप्रथम त यहाँहरू दुवै जना प्रति एकदम खु:सी छु । मैले नेपालमा यो क्षेत्रमा ठुलो संघर्ष गरेकी थिए । मुख्यतया मेरो घर परिवारले मलाई धेरै साथ दिनु भो , मेरो संघर्ष पुर्ण गायन यात्राको दौरानमा । त्यो बिगतका ३ओटा एल्मवहरु बजारमा ल्याउनको लागि थुप्रै चुनौती पूर्ण भएता पनि आज यो उपलब्धिले खु:सीले सिमा नाघेको छ । जसको कारण मेरो बाध्यता र पस्थितिको बाबजुद पनि आज आई.ए.एफ आईडलको उपाधि मेरो हातमा प-यो । जुन मैले सोचेको पनि थिएन , सम्पूर्ण नेपाली दाजु-भाई तथा दिदि बहिनीको अपार मायाँ र साथले गर्दा आज एकदम हर्षित छु ।
आईडलको उपाधि चुम्दा कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ?
सरला - - मलाई एकदम खु:सी लागेको छ, किन की मैले सोचेकै थिइन । सबै प्रतिस्पर्धीहरूले राम्रो गाउनु हुन्छ र टप ५ मा पुग्दा सम्म पनि त्यो अपेक्षा गरेको थिइन । तर जब मेरो नाम एक नम्बरमै उद्घोष गर्नु भयो त्यो बेलामा यदि मैले नेपालमा हुँदा गरेको संघर्ष बहराईनमा गरेको भए पक्कै पनि मेरो सांगीतिक यात्राले प्रगतिको अर्कै मोड लिने रहेछ भन्ने लागेको छ ।
हजुर त विशुद्ध लोकदोहरी गायिका हो ,बहराईन शाखाले आयोजना गरेको त विभिन्न विधाका गीतहरु समेटिएको प्रतियोगिता भएकोले कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ?
सरला - - हजुर पक्कै पनि ! धेरै कठिन भए पनि लोक दोहोरी गाउने कलाकारलाई अन्य विधाका गीत गाउन प्रोत्साहन निर्णायक मण्डलका वरिष्ठ संगीतकार तथा गायक पोखराज श्रेष्ठको अनुरोधमा आधुनिक गीत गाउन भन्नु भएको थियो । तत्पश्चात मैले गाएको उक्त गीत लाई औधी मन पराउनु भई प्रोत्साहन स्वरूप मलाई सेलेक्ट गर्नु भयो । र आगामी दिनमा केहि नयाँ गर्ने छु साथै संग संगै सबै विधालाई अगाडी बढाउने सक्दो प्रयास गर्नेछु ।
तपाँईको आगामी साँगीतिक यात्रा चुनौती पूर्ण हुने देखिन्छ । आगामी दिनमा यहाँले कसरी सबै विधालाई संयोजन गर्दै अघि बढ्नु हुन्छ ?
सरला - - हिजोका दिनमा लोक दोहोरी गीतहरु मात्र गाउँदथेँ । अब भोलिका दिनमा हरेक गीतमा सक्दो कसरत गरेर आफ्नो स्वरमा सजाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने र साङगीतिक यात्रा चुनौती पूर्ण भए पनि आफ्नो यात्रा सहज बनाउनको लागि आफु हर कदम तैयार रहनेनै छु ।
आगामी दिनमा यहाँको लक्ष्य के छ ?
सरला - - मेरो आगामी लक्ष्य भनेको साँगीतिकनै हुनेछ , किनकि मलाई नेपालमा त्यो खु:सी नमिले पनि आज यस मध्यपुर्विय राष्ट्र बहराईनमा त्यो खु:सी प्राप्त गरेकी छु आगामी दिनमा अझै सुधार्दै लग्ने छु । यसको,साथमा अरू नयाँ कृति एल्वम बजारमा ल्याउने छु ।
सहभागी प्रतियोगीहरुलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
सरला - - यो एउटा खेल हो हार/जीत हुन्छ नै । जति जना प्रतिस्पर्धीहरु हुनु हुन्छ कसैले हरेस नखानुहोस् । आफ्नो कमि कम्जोरीहरु लाई आगामी दिनमा सुधार्दै लानुभो भने भोलिका दिनमा केहि गर्ने आँट र शाहसको साथ अबश्य सफल्ता पाउनुहुने छ । सबै प्रतिस्पर्धी हरुले आज राम्रो कला प्रस्तुत गर्नु भएको छ , र त्सयतै भोलिका दिनहरूमा पनि तपाइहरुको भविष्य उज्वल छ । आफ्ना कला र प्रतिभालाई प्रतक्ष अगाडी लैजानुहोस् र भोलिको उपाधि हजुरहरुकोनै हो , त्यसैले निश्चिन्त हुनु होस् ।
अन्तरराष्ट्रिय कलाकार मञ्च बहराईन शाखा लाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
सरला - - अन्तरराष्ट्रिय कलाकार मञ्च बहराईन शाखा लाई धेरै धेरै धन्यवाद ब्यक्त गर्न चाहन्छु । यसरी विदेशमा लुकेर बसेका प्रतिभाहरुलाई खोजी गर्ने कार्यक्रम गर्नु भएकोमा आफुले सम्बोधन गर्ने शब्द नै नभएकोले आयोजक परिवार प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दै' उहाँहरू प्रति कृतज्ञ छु ।
बहराईनमा बस्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली तथा देश बिदेशमा बस्नु हुने समस्त नेपाली दाजु-भाई तथा दिदि-बहिनीहरुलाई कसरी सम्झन चाहनु हुन्छ ?
सरला - - म एउटा नेपालीको छोरी आज विदेशमा पनि यसरि उपाधि चुम्न सफल भएकोले प्रत्येक दिन मेहनत गर्दै नेपाल देखि अन्य देशमा र बहराईनमा बस्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली तथा देश बिदेशमा बस्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजु-भाई तथा दिदि बहिनीहरु लाई हृदय देखी धेरै धेरै धन्यबाद ब्यक्त गर्दछु |
हजुरले साँगीतिक यात्रा र सिङ्गिङ आईडलको दौरानमा कसैलाई संझन चाहनु हुन्छ ?
सरला - - नेपालमा बस्दा आदरणिय तुलसा घर्ती मगरको श्रीमान नन्द घर्ति मगरको प्रेरणा बाट आफु यो क्षेत्रमा प्रवेश ग रेको र त्यस्तै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहरी गायिका राधिका हमालको श्रीमान कृष्ण पुन मगर दाईलाई सम्झन चाहन्छु । साथै हिजोको उपाधि शुरु देखि अन्त्य सम्म निरन्तर साथ दिनु हुने पाल्पाली समाज बहराईन, मगर संघ बहराईन, अन्तराष्ट्रिय कलाकार समाज, डिएक्सएन नेपाली परिवार बहराईन, अर्घाखाँची प्रवासी समाज बहराईन, लाँङ्गघाली परिवार, झापाली यूवा समाज बहराईन, बाग्लुङ सेवा समाज लगायत सम्पूर्ण संघ/संस्था प्रतक्ष वा अप्रतक्ष रूपमा जो/जसले मलाई साथ दिनु भएको छ अपार मायाँ दिनु भएको छ म उहाँहरू सबैलाई सदैव मनको ढुकढुकीमा राख्ने प्रण गर्दछु ।
अन्त्यमा मिडिया मार्फत हजुरले भन्न चाहेको र मैले सोध्न बिर्सेको केहि छ भने भन्नुहोस न ?
सरला - - अन्तरराष्ट्रिय कलाकार मञ्च बहराईन शाखाले जुन कार्यक्रम ग-यो त्यो अत्यन्तै सकरात्मक कामको शुरुवात गरेको छ , त्यसको वर्णन गर्ने म संग कुनै शब्द छैन । भने,यसरी मिडियामा पहिलो पल्ट आफ्नो अन्तरबार्ता लिनु हुने राज्यसत्ता डटकमका पत्रकार कृष्ण सारु मगर र कान्तिपुर गल्फ साप्ताहिकका बहराईनका प्रतिनिधि कृष्ण हमाल प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । त्यसै गरि सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरु लाई हृदय देखी नै स-धन्यबाद ब्यक्त गर्दै हार्दिक आभारी छु ।
Last Updated on Wednesday, 25 February 2015 23:06
३३औँ मगर एकता दिवसबारे मगर अगुवाहरू के भन्छन ?
३३ औँ मगर एकता दिवस नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका मगर समुदायले यही फाल्गुण १५ गते शुक्रबार भव्य र उल्लासमय वातावरणमा मनाउँदै छन् । रुपन्देहीमा पनि यसको व्यापक रुपमा तयारीहरु भएका छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर नेपाल मगर संघ केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र थापा मगर लगायत रुपन्देहीमा सक्रिय नेपाल मगर संघसंग आबद्ध जिल्ला , नगर र वडा अध्यक्षज्युहरु तथा मगर अगुवाहरुको संक्षिप्त विचार ।
प्रस्तुती : सनु थापा मगर
महेन्द्र थापामगर, अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समिति , काठमाडौं
यो ३३ औं मगर एकता दिवस ले विशेष गरेर अहिले जातीय सद्भाव र जातीय सचेतनाको लागि सन्देश प्रवाह गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मनाउन गईरहेका छौं र संगसंगै यसै अवसरमा मगर अधिकार र सचेतनाको लागि काठमाडौंमा प्रथम पटक मगरहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्न गइरहेका छौं । यो सम्मेलनमा करीब १८ देशमा बसोबास गर्ने मगरहरुको सहभागिता रहने छ । यसको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको छ । ईतिहास भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र संबद्र्धन मगर संघको मुल मन्त्र नै हो । यसैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जोडीएको छ । अहिले देशमा संविधान बनाउने समय चलिरहेको हुँदा हामी मगरहरु विचार र सिद्धान्तले फरक फरक हौँला तर अब मगरहरुको साझा मुद्दामा एक हुनु पर्छ भन्ने हो । यो मगर स्थापना दिवसलाई एकता दिवसको रुपमा मनाईरहँदा मगरहरु अझै एकता हुन जरुरी रहेको छ । मगरहरु आफ्नो मुद्दामा एक भएर उभिनु पर्छ । मगर दिवसको यस उपलक्ष्यमा सम्पुर्ण दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
दलबहादुर विरकट्टा मगर, अध्यक्ष ,नेपाल मगर संघ जिल्ला समिति, रुपन्देही
मगरहरुको जुन एकता दिवस हो यो मगरहरु जातीय स्वाभिमान जगाउनको लागि , मगरहरुको समृद्धिको लागि , अनुशासित , परिस्कृत र कमजारी पन्छाउने र मगरहरुको पहिचानसंग जोडेर हेर्नु मुल भुमिका रहन्छ । राज्यका हरेक तह र तप्कामा मगरहरुको पहुँच वृद्धि र शैक्षिक जागरणसंग पनि यो दिवसको महत्व जोडिनु आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति मध्ये प्रमुख जातिको रुपमा रहेको मगरहरुको यो राज्य निर्माणमा महत्वपुर्ण भुमिका रहँदै आएको छ । त्यसैले कुनै पनि कोणबाट यो राज्यले मगरहरुलाई अधिकारवञ्चित गर्न मिल्दैन । मगर दिवस भातृत्व जगाउनका साथै यो दिवस आन्दोलनको रुपमा पनि मनाउनुपर्छ । पहिचानबाट विमुख भएकाहरुलाई राज्यको मुल धारमा ल्याउनको लागि पनि पहलको रुपमा भुमिका खेल्नुपर्छ । सिङ्गो मगरहरुले अहिले भईरहेको जातीय राज्यको भ्रम चिर्न पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ । पहिचानको मुद्दामा पनि मगरहरुले महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाहा गर्नु पर्छ । र यो ३३ औं मगर एकता दिवसको सुखद अवसरमा म व्यक्तिगत एबं नेपाल मगर संघ जिल्ला कार्य समिति रुपन्देहीको तर्फबाट देश विदेशमा रहनु भएका सम्पुर्ण मगर लगायत अन्य ग्रैह्र मगरहरुमा सुख शान्ति , समृद्धि एबं उत्तर–उत्तर प्रगतिको शुभकामना कामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
अध्यक्ष, क्या. किशन बहादुर थापा मगर नेपाल मगर संघ बुटवल उपमहानगर पालिका, रुपन्देही
२०३९ साल फागुन १५ गतेका दिन तनहुँको दमौलीमा प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनमा नेपाल मगर संघले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो । यसै ऐतिहासिक दिनलाई मगर एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आईरहेका छौं । यसरी वैधानिकतालाई २०३९ लाई पर्खे पनि २००७ को प्रजातन्त्र पछि २०१२ साल तिर बाट नै मगर समाज सुधार लाङघाली परिवार, लाङघाली परिवार संघ जस्ता मगर समाजको एकता गतिविधिहरु चलेको थियो । २०१४ साल गुल्मीको भार्से र तनहुँको कुलुङ्मा मगरहरुलाई एकजुट गराउने काम भयो त्यस पछि लगातार मगरहरुले कार्यक्रमहरु गर्दै आएर नेपाल मगर संघको स्थापना भयो अथवा संघले बैधानिकता पायो ।
अध्यक्ष, प्रेम थापामगर नेपाल मगर संघ तिलोत्तमा नगर समिति , रुपन्देही
मगरहरुलाई एकताबद्ध बनाउने काम नेपाल मगर संघले गरेको छ । यसको स्थापना दिवसको अवसरमा अहिले ३३ औ दिवस मनाईरहँदा हामी संस्थागतरुपमा धेरै पाको भैसकेका छौं । हामिले ३३ बसन्त पार गरिसकेका छौं । मगर जागरणको हिसाबले यो उपलब्धी मान्नु पर्छ । तर अझै मगरहरुको समृद्धि भैसकेको छैन । मगर समुदायको विकास र पहुँचको लागि हामिहरुले अझै संघर्ष गर्न जरुरी छ । यसमा हामी सबै मगर दाजुभाईहरु एक भएर अगाडी बढ्नु पर्छ । कला र संस्कृतिको हिसाबमा धनी मगर समुदायले आफ्नो हक र अधिकारको लागि अब अन्तिम लडाँई लड्ने बेला भएको छ यसमा सबै मगर एक भएर लाग्न आग्रह गर्छु ।
अध्यक्ष, श्याम राना मगर नेपाल मगर संघ गाउँ समिति मोतिपुर, रुपन्देही
मगर एकता दिवसलाई सिर्जनात्मक रुपमा मनाउन तर्फ प्रयास गर्नुपर्छ । पहिचान सहितको संघीयताको दवाबको लागि शक्ति प्रदर्शनको रुपमा पनि यो ३३ औँ मगर एकता दिवसलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ । मगर संस्कार र संस्कृतिको विकास र संरक्षण गर्दै आगामी नयाँ पुस्ताहरुले मगर समाजको बारेमा जान्न र बुझ्न मिल्ने बातावरणको अब सिर्जना गर्नु पर्ने बेला भएको छ । यो मगर दिवसको अवसरमा सम्पुर्ण मगर दाजुभाई दीदि–बहीनीहरुको सुस्वास्थ र उज्वल भविष्यको कामना गर्दछु ।
अध्यक्ष माथवरसिङ सलामी मगर साबिक आनन्दवन गाउँ समिति, रुपन्देही
यो मगर दिवस मगरहरु एकता भएको दिवस हो । यसलाई सास्कृतिक पर्वको रुपमा विकास गर्न आवस्यक छ की छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ । यो समय सान्दर्भिक पनि छ तर यो उचित छ की छैन यो बारेमा सबैले बहस गर्न जरुरी भएको छ । मगर एकता दिवसले सम्पुर्ण मगरहरुको एकता संगसंगै मगर भाषा , धर्म , संस्कार र सस्कृतिको पनि संरक्षण गर्दै लैजाने काम गर्न जरुरी देखिएको छ । यो गौरबको दिनमा मगर युवा पिडीहरुलाई आफ्नो पहिचान जोगाउन तर्फ लाग्न आग्रह गर्दछु ।
अध्यक्ष , सुर्य कुमार सारु मगर सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी समिति
यो मगर दिवस खास गरेर मगर संघ स्थापना भएको कुरा हो , यसैलाई नै एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आईरहेका छौं । यसले मगरहरुलाई सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा एकता बनाएको छ । तर अब मगरहरु राजनैतिक र वैचारिक रुपमा पनि एकता हुन जरुरी भएको छ । यो मगर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाईरहँदा मगरहरुलाई वैचारिक र राजनैतिक रुपमा एकै ठाउँमा बाँध्ने काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । राजनैतिक रुपमा पनि मगरहरु एकता हुन सकेको खण्डमा यसैमा नै मगर समुदायको हित छ । त्यसैले यो ३३ औं एकता दिवस मनाईरहँदा मगरहरु सामाजिकरुपले मात्र होईन राजनैतिकरुपले पनि एकता हुनु पर्ने कुराको सन्देश जान जरुरी छ ।
Last Updated on Wednesday, 25 February 2015 22:13
पार्टीको रजत महोत्सव सृजनात्मक हुनेछ - अस्लामी
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उप महासचिव टोप अस्लामी मगरसंग राज्यसत्ताका लागी सनु थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः।
सनु: राजमुपाको २५ वर्षे इतिहासलाई छोटकरीमा कसरी केलाउनु हुन्छ ?
अस्लामी - राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको २५ वर्षे इतिहास गौरवमय छ । मूलतः राष्ट्र निर्माणका लागि मौलिक विचारधारा यसको सवल पक्ष सावित भएको छ । यो लामो यात्रा पछि मूलुकको आमूल परिवर्तनका लागि जे जस्ता मुद्दाहरु पार्टीले उठाउँदै आएको थियो, ती मुद्दाहरुको वैधता कायम भएको छ ।नेपाली जनताको लागि अबको दीर्घकालिन राजनीतिक भरोसा भनेकै जनमुक्ति मात्र हो ,पार्टी स्थापनाकालदेखि आफ्ना मुद्दामा अडिग त छ नै साथै निरन्तर संघर्षशिल छ । यस अर्थमा पार्टीले अबका दिनमा मूलुकको आमूल परिवर्तनका लागि आवश्यक नेतृत्वकारी भुमिका निभाउन सक्ने तहमा स्थापित भईसकेको छ । आम जनसमुदायलाई पनि जनमुक्ति एउटा उदाउँदो राजनीतिक शक्ति हो भन्ने लागिरहेको छ । नेपाली जनताको लागि अबको दीर्घकालिन राजनीतिक भरोसा भनेकै जनमुक्ति मात्र हो ।
सनु: अहिलेको सन्दर्भमा पार्टी कसरी अगाडि लैजाने सोचमा हुनुहुन्छ ?
अस्लामी - पार्टीलाई परम्परागत शैली भन्दा केही फरक ढङ्गबाट अगाडि लैजाने सोंच छ । आज सम्म जे जसरी आन्तरिक रुपमा छलफल हुँदै आएको थियो अब त्यसलाई पार्टी र देशको लागि व्यवहारिक रुपमै लागु गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय पनि भएको छ ।
सनु: पार्टीले के गर्नु पथ्र्यो ? के गर्न सकिएन ?
अस्लामी - साँगठनिक पक्ष कमजोर रह्यो । यसमा राजनीतिक, साँगठनिक सबै पक्ष कमजोर रहेकै हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । कतिपय कुरा समयलाई पर्खदा पनि पार्टीले तत्काल गर्न सक्ने कामहरु परिणाममुखी हुन सकेनन् ।
सनु:पार्टीमा के के कमीकमजोरीहरु रहे ?
अस्लामी - कुनै पनि संगठनमा कमी कमजोरी त हुन्छन् नै । मूलुकका लागि एउटा वैकल्पिक मार्ग दिएर अगाडि बढेको राजनीतिक दलले गर्न नसकेका राजनीतिक सांगठनिक कमीकमजोरी बारे कुनै दिन फेहरिस्त नै आउला ।
सनु: पार्टीलाई अझै मजबुत बनाउन के के गर्नुपर्छ ?
अस्लामी - पार्टीगत रुपमा गर्नु पर्ने त्यस्ता धेरै काम छन् । मुख्यतः संगठन निर्माण र त्यसको सही परिचालन नै हो । त्यस बारे पार्टी सचेत छ ।
सनु: रजत वर्षको सन्दर्भमा पार्टीले के सोच बनाएको छ ?
अस्लामी - पार्टीले भनेको छ — रजत वर्ष सृजनशिल वर्ष । यस सोंचलाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीको हालै सम्पन्न संघीय परिषदको १५ औं बैठकले पार्टी महासचिव केशव सूर्यवंशीलाई संयोजकको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । पार्टीको रजत वर्ष सृजनात्मक हुनेछ ।जनमुक्तिले यस बारेमा जुन सोंच लिएको छ नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा यो उदाहरणीय हुनेछ । मूलुक निर्माण अभियानमा नयाँ ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा पछिको पुस्तालाई पनि राम्रो सन्देश दिने पार्टीको इच्छा हो । जनमुक्ति विचारधाराबाट नै मूलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीले निर्माण गर्न चाहेका छौं ।
(सनु — बुटवल बाट प्रकाशित अर्धसाप्ताहिक सँघिय एक्सप्रेसका सम्पादक हुन)
Last Updated on Wednesday, 25 February 2015 23:43